किशोर नेपाल- शुक्रवार पोर्नोग्राफिक भयो रे! शुक्रवार पोर्नोग्राफिक भएकोमा आक्रोशित एकजना युवकले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुक्रवार सम्पादकका नाममा एउटा भद्दा गाली बकेर आफ्नो औकात देखाइहाल्यो। उसले प्रयोग गरेको 'बास्टर्ड' शब्द आफैँमा तल्लो स्तरको पोर्नोग्राफी हो।
किशोर नेपाल- स्वयम्भूको डाँडाबाट कान्तिपुर शहरलाई आँखामा डुबायो भने के के देखिन्छ? रायनाले अहिलेसम्म यो कुरा सोचेकी थिइन। स्वयम्भूकै मन्दिरमा पुगेर हेर्दा भने उसले विशेष केही देखिन। कान्तिपुर शहर धमिलो थियो। बिहानैदेखि टन्टलापुर घाममा टल्किएर सखाप भएको थियो शहर।